Ahoana no ahafahako mamerina ny hafatra Telegram - VidaBytes | LifeBytes
Ahoana no ahafahako mamerina ny hafatra Telegram
Iris Gamen | 13/06/2022 20:17 | fampiharana
Azoko antoka fa efa nitranga taminao izany nanova ny findainao ianao, tsy nanana backup ianao ary very tsy ny resadresaka tamin'ny chat Telegram anao ihany, fa ny rakitra rehetra nizara azy ireo. Matetika dia tsy omenay lanja indrindra izany, fa rehefa misy asa na antontan-taratasy na antontan-taratasy manokana ireo resaka ireo dia lasa sarotra ny raharaha.
Aza manahy fa eto izahay hanampy anao amin'ity olana ity. Hanome anao dingana maromaro izahay ary toro-hevitra arahina mba hahafahanao mamerina hafatra avy amin'ny kaontinao Telegram, ary koa ny angona sy antontan-taratasy manan-danja.
Raha, etsy ankilany, ianao no namafa ny chat tsirairay avy amin'ny rindranasa tsirairay ary ankehitriny ianao te-hanarina azy ireo dia ho vitanao ihany koa izany. Telegram, manome anao fahafahana hamafa ny hafatra na ny tantaran'ny chat tsy misy soritra. Na ireo hafatra nofanteninay hofafana ireo aza dia afaka mamerina azy ireo ianao. Mijanòna ary hazavaintsika ny fomba.
1 Inona ny fampiharana Telegram?
2 Ahoana ny fomba hamerenana ny hafatra Telegram
2.1 bokotra manafoana
2.2 Hafatra voatahiry ao amin'ny Telegram
2.3 Jereo ny cache ny fitaovanao
3 Ahoana ny fomba backup Telegram |
Inona ny fampiharana Telegram?
Telegram, izany dia a fampiharana hafatra eo noho eo azo ampiasaina amin'ny fitaovana isan-karazany toy ny Windows, MacOs ary Linux, tsy manadino ny Android sy IOS. Saika azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra ampiasaintsika isan'andro izy io. Misy ireo mampitaha ity fampiharana ity amin'ny WhatsApp, noho ny fitovizan'izy ireo ary saika mitovy ny tanjona.
Ny mampiavaka ny iray amin'izy ireo dia ny Telegram dia tsy mila fitaovana finday amin'ny fampandehanana azy. Noho izany dia voafehy tsara ny tsiambaratelon'ny mpampiasa azy rehetra. Ankoatra izany, ny teboka tsara dia izany ny fampahalalana izay zaraina amin'ny resaka dia voatahiry ao amin'ny lohamilina Telegram ary tsy amin'ny fitaovana.
Ahoana ny fomba hamerenana ny hafatra Telegram
Amin'ity fizarana izay ahitanao ny tenanao ity dia ho afaka hahita dingana isan-karazany azonao atao ianao Avereno indray ny resaka sy ny rakitra Telegram voafafa na very.
App telegrama, mamela anao hanafoana izay nofafanao, na fanahy iniana na tsy nahy. Ataovy ao an-tsaina fa tsy maintsy manao ity dingana ity ianao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra rehefa nofafanao ny hafatra tamin'ny resaka.
Rehefa manapa-kevitra ny hamafa chat iray manontolo ianao dia hahita a safidy miaraka amin'ny fahafahana manafoana io hetsika io mandritra ny segondra vitsy monja. Raha manindry io bokotra manafoana io ianao dia ho afaka hamerina ny zava-drehetra ao anatin'ny segondra, hafatra ary rakitra tsy misy olana.
Ao anatin'io vanim-potoana io ihany no ahafahanao manao an'io dingana io izay anehoan'ny fampiharana anao fa mety eo amin'ny faran'ny efijery, manana fotoana tombanana manodidina ny 5 segondra ianao.
Raha toa ka mamafa hafatra ao anatin'ny chat tsirairay ianao dia hanana vahaolana kely. Na izany na tsy izany, rehefa vonona ny hanala zavatra amin'ny fampiharana ianao dia ity hanontany anao imbetsaka izy io raha tena te hamafa votoaty toy izany ianao, raha izany dia mila manaiky fotsiny ianao ary miandry ny fanesorana azy.
Hafatra voatahiry ao amin'ny Telegram
Azo antoka fa imbetsaka ianao no namonjy hafatra nefa tsy tsapanao. Ity fampiharana hafatra ity, Izy io dia manana fampirimana voaorina izay misy ny hafatra voatahiry ary azonao ampiasaina amin'ny fotoana rehetra.
Maro amin'ireo mpampiasa Telegram no tsy mahalala momba ity lahatahiry miafina ity ary mino fa very ny hafany. Tsy mila manahy intsony fa tsy very ireny hafatra ireny fa efa voatahiry ary ho afaka hahita azy ireo ianao, amin'izao fotoana izao izahay dia milaza aminao ny fomba hamerenanao azy ireo.
Mba hidirana amin'izy ireo dia tsy maintsy manokatra ny fampiharana hafatra ianao. Manaraka, mankanesa any an-tampon'ny havia amin'ny efijery, izay hidiranao ny varavarankelin'ny mombamomba anao. Avy eo safidio ny anaranao sy ny nomerao, jereo ny mpampiasa anao ao amin'ny app. Ao amin'ny kisary fitaratra lehibe izay miseho eo amin'ny efijery chat, soraty ny solon'anarana ary mandeha ho azy, Telegram, dia mampiseho anao ny lahatahiry misy hafatra voatahiry.
Jereo ny cache ny fitaovanao
Raha toa ka very na nofafanao ny rakitra iray, na multimedia na lahatsoratra, ary te-hanarina azy ianao, dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao. Voalohany, mila mandeha any amin'ny mpitantana ny rakitra amin'ny findainao ianao. Tadiavo ny lahatahiry eo ambanin'ny anaran'ny fitaovanao, raha toa ka Android io, ny lahatahiry dia hanana anarana mitovy.
Rehefa hita, safidio izany, midira sy ny atiny. Ao anatiny dia afaka mahita lahatahiry samihafa ianao izay itehirizana ny cache rehetra amin'ny fampiharana napetraka amin'ny fitaovanao. Tadiavo ny lahatahiry eo ambanin'ny anaran'ny Telegram, ary midira ny rakitra rehetra nozaraina tao amin'ny fampiharana ary tadiavo ilay nofafanao tsy nety.
Ahoana ny fomba backup Telegram |
Ity dingana fitahirizana ity dia somary hafa noho ny mahazatra hitantsika ao amin'ny WhatsApp. Ny fampiharana Telegram dia manana a fitaovana ahafahantsika mitahiry ny angon-drakitra rehetra momba ny resaka ataontsika ao amin'ny solosaintsika manokana.
Mba hahafahana manondrana ireo chat izay nosokafanay tao amin'ny Telegram amin'ny PC, ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny tsy maintsy anananao. nametraka ny fampiharana eo amin'ny biraon'ny fitaovana. Rehefa voapetrakao dia ianao ihany no manana midira amin'ny nomerao findainao ary ampidiro ny code izay nalefa tany amin'ny iray amin'ireo fitaovanao, matetika ny finday.
Rehefa manokatra ny fampiharana amin'ny solosainao ianao, tsindrio eo amin'ny sakafo izay miseho eo amin'ny tapany ambony havia amin'ny efijery, fantatra amin'ny anarana hoe hamburger menu. Raha vantany vao voakitika, dia misy sakafo aseho ary ho hitanao ny safidy safidy.
Rehefa manindry ny Settings dia misy varavarankely mipoitra misy safidy samihafa. Amin'ireo safidy rehetra ireo, tsy maintsy misafidy ny mandroso ianao. Hisokatra indray ny efijery vaovao izay tsy maintsy hisafidiananao ny safidy "Export data from Telegram", ao anatin'ny fizarana "Data and storage".
Toy ny mitranga indraindray rehefa manao backup, Tsy maintsy mandinika tsara ny safidy rehetra atolotra anao ianao., satria miankina amin'ny hoe misafidy iray na iray ianao, ity kopia ity dia ho feno na latsaka.
Araka ny hitanao eo amin'ny sary dia misy ny fahafaha-mitahiry isan-karazany, afa-tsy amin'ny chat manokana na manokana, vondrona manokana na ho an'ny daholobe, haben'ny rakitra, sns. Rehefa manana ny zava-drehetra ianao ary vita ny kopia dia ho voatahiry ao amin'ny lahatahiry fampidinana ny rakitra rehetra eo ambanin'ny anarana hoe "Telegram Desktop".
Tadidio fa raha tsy misy backup, dia tsy ho afaka hamerina ny resaka, na ny voafafa hafatra na multimedia rakitra. Manantena izahay fa hanampy anao ireto toro-hevitra fototra momba ny famerenana ny hafatra Telegram ireto. Raha misy tranga voatsabo amin'ny fotoana rehetra mitranga aminao, dia efa hainao ny tokony hatao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » fampiharana » Ahoana no ahafahako mamerina ny hafatra Telegram